Amasondo enkomishi namasondo okugaya
Isondo lomcibisholo lokugaya idayimane lenkomishi yedayimane lezigayi ezibanjwa ngesandla zokugaya amaholo nokubunjwa kwendawo ekhonkolo, imiphetho noma amakhona njll.
Isondo lenkomishi yokugaya idayimane le-Z-LION lisetshenziswa kakhulu kuma-grinder abanjwa ngesandla afana no-Hilti ukuze kugaywe amaholo nokulolongwa kokhonkolo, imiphetho noma amakhona lapho ama-grinder aphansi angakwazi ukufinyelela khona.Isondo lenkomishi yomcibisholo liza namasegimenti wedayimane lomcibisholo.
Isondo lenkomishi yedayimane ye-Turbo yokugaya nokulinganisa indawo kakhonkolo emaphethelweni, amakholomu njll
I-Z-LION 36B isondo lenkomishi ye-turbo yakhelwe ngamasegimenti ephethini ye-spiral turbo ukuze inikeze isivinini sokusika ngokushesha kuyilapho igcina ukusikwa okushelelayo.Isetshenziswa kakhulu kuma-grinder abanjwa ngesandla afana no-Hilti, i-Makita, i-Bosch kumaphrojekthi anhlobonhlobo ukusuka ekubunjweni nasekupholishweni kokhonkolo, ukuya ekugayeni kukakhonkolo okunolaka noma ukuleveling kanye nokususwa kwe-coating.
Isondo lenkomishi yedayimane lengxenye ye-Rhombus yomsebenzi onqenqemeni wokupholisha phansi kukakhonkolo
I-Z-LION 34C isondo lendebe yedayimane lengxenye ye-rhombus inomklamo wesigaba esinolaka esihlinzeka ngokugaya okusheshayo.Isetshenziswa kakhulu kuma-grinders abanjwa ngesandla njengamathuluzi onqenqema omsebenzi onqenqemeni embonini yokupholisha phansi kukakhonkolo.Ilungele ukubunjwa, ukulinganisa, ukugaya nokususwa kwe-coating.Ifanele ukusetshenziswa kokubili okomile nokumanzi.
Isondo lenkomishi yedayimane lengxenye ye-T yezigayi ezibanjwa ngesandla zokugaya okunolaka kanye nokuleveliswa kwendawo kakhonkolo emaphethelweni, amakhona njll.
Isondo lenkomishi ye-Z-LION T-segment iza namasegimenti edayimane anomumo we-T.Isetshenziswa kakhulu kuma-grinders aphethwe ngesandla afana ne-Hilti, i-Makita, i-Bosch yokugaya okunolaka nokulinganisa indawo kakhonkolo emaphethelweni, emakhoneni nakwezinye izindawo lapho ama-grinder aphansi angakwazi ukufinyelela khona.
Isondo lenkomishi yedayimane eyimigqa emibili yokugaya nokulinganisa indawo kakhonkolo emaphethelweni, amakholomu njll
I-Z-LION 19B isondo lenkomishi yemigqa ephindwe kabili ifika nemigqa emi-2 yamasegimenti edayimane.Isetshenziswa kakhulu kuma-grinder aphethwe ngesandla afana no-Hilti, i-Makita, i-Bosch ukuze ugaye ngokushesha kanye nokushelela kwendawo kakhonkolo emaphethelweni, amakholomu lapho ama-grinder aphansi angakwazi ukufinyelela khona.
Isondo lokugaya idayimane elingu-10inch lizofakwa kuma-grinder ekhanda elilodwa ukuze kugaywe ukhonkolo phansi
Isondo lokugaya idayimane le-Z-LION 10inch lenzelwe ukuthi lifakwe ku-250mm single head floor grinders njengeBlastrac.Ikakhulukazi isetshenziselwa ukulungiswa kwendawo engaphansi kukakhonkolo kanye nokubuyisela njengokulinganisa nokushelela phansi kukakhonkolo, ukususwa kwe-coating, ukugaya indawo emangelengele njll.
Isondo lokugaya idayimane le-D240mm le-Klindex lokulungiselela ukhonkolo waphansi
I-Z-LION D240mm Isondo lokugaya idayimane le-Klindex lenzelwe ukuthi lifakwe kuma-grinder aphansi e-Klindex.Ngamaphini angu-3 ngemuva ukuze alingane nochungechunge lwe-Klindex Expander, Levighetor, Hercules kanye ne-Rotoklin.Ikakhulukazi isetshenziselwa ukugaya phansi kukakhonkolo kanye nokususwa kwe-surface coating.
Isondo lenkomishi yedayimane ye-Ceramic yokugaya nokupholisha ukhonkolo
Isondo lenkomishi yedayimane ye-Ceramic yakhelwe ukuthuthukisa ikhwalithi yomsebenzi onqenqemeni ngenkathi yehlisa imihuzuko eshiywe amasondo enkomishi yensimbi.Liphinde libize ithuluzi lesikhashana ngoba lingasetshenziswa njengebhuloho eliphakathi kokugaya insimbi nokupholishwa kwe-resin ukuze konge inani lomsebenzi.Isetshenziswa kakhulu kuma-grinder aphethwe ngesandla afana ne-Makita, i-Dewalt, i-Hilti njll. ukugaya nokupholisha imiphetho, amakhona namabala okunzima ukuwafinyelela ama-grinder aphansi, kanye nanoma yikuphi ongafinyelela kuzo.